Inqwelo yeLaminar Flow Transfer
Sothi laminar fphantsiugqithiselo inqwelo is yenzelwe ukugcinwa kunye nokuhanjiswa kweemveliso ezinovakalelo kungcoliseko phakathiezahlukeneyoindawos.Inqwelo yethu yokudlulisa inokubonelela nge-ISO 5 okanye i-ISO 4 (iklasi ye-100 okanye iklasi ye-10) iimeko zokugcina izinto ezibalulekileyo) icocekileokusingqongileyotoukuphelisa ukungcoliseka ngexesha lokudluliselwa kwezinto eziyinyumba.
Isihluzo se-HEPA luhlobo lwesihluzo somoya esinomatshini. Olu hlobo lwesihluzo somoya lunokuthi ngokwethiyori lususe ubuncinane i-99.97% yothuli, umungu, ukungunda, ibhaktiriya, kunye nawo nawaphi na amasuntswana asemoyeni anobungakanani be-0.3 microns (µm).
Iibhokisi ze-Hepa Terminal Filter iibhokisi zokucoca umoya wegumbi kunye nezihluzo ze-microparticulate ezakhelwe ngaphakathi ezisebenzela ukuhluzwa kunye nokuhanjiswa komoya kwi-1000, i-10000 kunye ne-100000 ye-air conditioning systems.Ukusebenza kakuhle ukusuka kwi-95% ukuya kwi-99.9995% kunye ne-0.3 micron.Kulula ukuyifaka, uxinzelelo oluphezulu lwe-static, ingxolo ephantsi, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, umoya ulungelelene, uxinzelelo lomoya lusasazeka ngokulinganayo.
Ukwahlula iintsholongwane, iintsholongwane kunye namasuntswana othuli ngaphambi kokungena komoya kwigumbi elicocekileyo nasemva kokusasazwa komoya.
Ephathwayo Laminar Flow Clean Bench
I-laminar ephathekayo ehamba ngokucocekileyo iibhentshi zincinci ezincinci ezicocekileyo ezinobunzima bokukhanya, i-compact kunye ne-space-saving design ekhoyo ngobukhulu obahlukeneyo.Ukuqukuqela okuthe nkqo nokuthe tye kunokufumaneka.
Ibhentshi yeLaminar ethe nkqo eCocayo
Sothis YJ Series free-standing laminar ibhentshi ecocekileyo ibonelela umoya osulungekileyo yi HEPA lokucoca phantsi ISO 5 (iklasi 100) bume phezu kweendawo zokusebenza ezinkulu, plus ukuvumela imiphezulu umsebenzi vibration-free.Kwiihowudi zokuqukuqela ezithe nkqo, umoya ococekileyo ohluziweyo uyehla usuka kumphezulu wokucoca phezulu ukuya kumphezulu womsebenzi.
Zombini i-OEM kunye ne-ODM ziyafumaneka.
I-Syena CJUthothoIi-Horizontal Laminar flow hoods (IiBhentshi eziCocileyo) zibonelela nge-ISO 5 engangcolisekiyo (iklasi ye-100) i-HEPA-ihluzo lokusingqongileyo,Bi-uilt-in kunye ne-easy-to-sterillize indawo yokusebenza yensimbi engenasici.Zombini i-OEM kunye ne-ODM ziyafumaneka.
I-Ceiling Laminar Flow Hood
I-ceiling laminar flow hood iyiyunithi yokucoca umoya enokuthi inike indawo ecocekileyo yendawo kwaye inokufakwa ngokuguquguqukayo ngaphezu kwendawo efuna ukucoceka okuphezulu.I-ceiling laminar flow hood inokubonelela nge-ISO 5/100 umoya ococekileyo ukufezekisa ukucoceka okufunekayo kwendawo yokusebenza.Isetyenziswa kakhulu kwezonyango, i-elektroniki, amayeza, uphando kunye nophuhliso iilabhoratri kunye nezinye iinkalo.
Uxinzelelo olubi lwendawo yokubeka ubunzima kwi-Pharmaceutical
I-Sothis yokuveyisha idokodo ikhusela imathiriyeli ekrwada ngexesha lesampulu kunye nokusebenza kokusasazwa kwaye inqanda ukungcoliseka.Ikhusela abasebenzi kumasuntswana anetyhefu ngelixa uqhuba inkqubo yokuhlangabezana neemfuno zakho okanye yenzelwe wena.Inqanaba lokucoca linokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo ukusuka ku-ISO8 ukuya kwi-ISO5 ngokweemfuno zomsebenzisi.